बिरोध अवरोध हैन, सहयोग र साथको समय
You are here: Home»demo1»बिरोध अवरोध हैन, सहयोग र साथको समय
Tuesday, 05 May 2015 20:42
जिबन हामी सबैको अनिस्चित छ, समय अनौठो छ , भोलिको बारेमा भबिस्यबाणी गर्नु मुर्खता मात्रै हो। आज कोशीस गरौ ,आज राम्रो गरे भोली उसै राम्रो हुन्छ। यो महाभुकम्पले कसैको ज्यानै चुडयो ,कसैको परिवार खोस्यो , कसै कसैलाई जिबनभरलाई पुग्ने चोट दियो त कोही भाग्यमानी भयो बच्यो भुकम्पबाट, तर हाम्रो मन धर धरी रुवायो,हामी सबैलाई निस्तब्ध बनायो।। भुकम्पबाट बचेँपनी आज जिबन जिउनुमा अप्ठ्यारो परेको छ लाखौं दाजुभाइ दिदी बहिनिहरुलाई। हुन त धेरै दात्री राष्ट्र , सस्था अनी ब्यक्तिहरुले सहयोग गरिरहेकै छ अनी क्रम जारी छ। उनिहरु सबैलाई हृदयको अन्तरकुनाबाट मेरो सलाम।
अधिकाङ्स जनता अनी सस्थाहरुले बिशाल हृदयका साथ राहत समानन्तर सबैलाई बाडिरह्दा पनि कोहिबाट भने राहत बाडदा पनि आफन्त नातागोता कार्यकर्ता छुट्टाइदैछ भन्छन। राहतका लागि दिईएका समान पनि लुकाइयो, बेचियो भन्छन।हुन त मलाई लाग्छ यि समाचार असत्य होलान तर सत्य भए मानबता खै? कोही मान्छेलाई १ सिटा खाने चामल छैन कसैलाई बोरा बोरा दिनुको अर्थ के? कसैलाई ओत लाग्न केही साधन छैन, कसैले घरमा पाल राख्नुको अर्थ के? सरकार भन्छ्न सबै राहत हाम्रो झोलामा राखिदे हामी बिसतारै राहत जिल्ला अनी गाउ प्रतिनिधिमार्फत बाडछौ, हैन भने तिमीहरुको समान बन्धकी रहनेछ। राहत त छिटोभन्दा छिटो बाडनु पर्ने हैन र? नत्र राहतको अर्थ के? राहत के को लागि? सरकारले त सम्पूर्ण नेपालीलाई एक आपसमा साथ सहयोग गर्नु भनेर यो बिपतिमा सल्लाह दिनु पर्ने हैन र? सरकार आँफैले भोलन्टिअर मान्छेहरु खोजेर राहत तुरुन्त बाडनमा लाग्नु पर्ने कि भोलन्टिअरहरुलाई नै हतोत्साही बनाउने? राहतको लागि आएको समान भन्सारमा एअर्पोर्टमा बन्धक बनेको छ भन्ने समाचार पढन अनी सुन्न वाध्य छौ हामी, के यो कस्तो सम्यन्त्र हो नेपाल सरकारको? यो के का लागि? सरकार प्रशासनको काम पीडितलाई राहत दिने कि अझ पिडा दिने हो?बिन्ती छ सरकार भोक, शोक, रोग, जाडोबाट भुकम्प पीडित लाई बचाउ, यदी तिमी सक्दैनौ भने उनिहरुलाई बचाउन, अग्रसर पाइलाहरुलाई काढे तार लगाउने कोशीस नगर। लाखौं हातहरु उठेका छन अनी लाखौं पाइला हरु अघी बढेका छन ति हाम्रा पीडित दाजुभाई -दिदी बहिनिहरुलाई बचाउन। उनिहरुलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दैनौ भने कृपया हतोत्साही बनाउने काम पनि नगर सरकार।
जे होस् आजको यस दु:खद घडीमा सम्पूर्ण नेपालीले एक आपसमा साथ सहयोग गरिरहेकै छन यो क्रम जारी होस। अनी बिदेशबाट सहयोग आएको आएकै छ सही सदुपयोग होस। यो समय भनेको एक आपसमा बिरोध गर्ने आरोप प्रत्यारोप गर्ने हैन यो समय भनेको त एक मिनेट भय पनि आफ्नो नजिकमा रहेका दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुको दर्दमा मलम लगाउनु हो। यो समयलाई कसैको खोट पहिलाउदै हिंडेर खेर नफालौ। सक्नु हुन्छ भने सबैले आफ्नो वरीपरी रहेकालाई सहयोग गर्नोस, सक्नु हुन्न भने आँफैलाई भए पनि सम्हाल्नोस, त्यत्ती पनि सक्न्नु हुन्न भने नजिकका साथीभाइलाई साथ माग्नोस तर कोही कसैको बिरोध गर्दै नहिडनोस किन कि तपाईंले त तपाईंको समय खेर फाल्नु हुन्छ हुन्छ अरुको सहयोगी हातलाई पनि अबरोध गरिरहनुभएको हुन्छ। यो हाम्रो कारुणिक अवस्थालाई बिबादमा नअल्झाएर साथ र सहयोगका साथ अघी बढौ।
राहत राहत नै हो जसको हातबाट पुगे पनि तसर्थ कसैले पनि गोरुको बारै टक्का नगरौ , राहत आफ्नै हातबाट बाडनलाई। तपाईं एक्लैले राहत बाडेर कहिलै सम्भब छैन, तसर्थ राहत बाडन पनि साथ सहयोग सबैको लिनु नै हितकर, प्रभाबकारी र फलदाइ हुनेछ। तपाईं त्यसै भाग्यमानी हुनुहुन्छ आज राहत बाडन पाउनु भएको छ, राहत दिन पाउनु भएको छ हेर्नोस त ति पीडित अनुहारहरुलाई उहाहरु पनि हिजोसम्म अब्बल नै हुनुहुन्थ्यो,के थाहा भोली तपाईं हाम्रो स्थिती? तसर्थ स्वार्थ भन्दा माथि उठेर हामी सबै नेपाली यो बिपतिमा एक भएर साथ सहयोग गरौ।जती सक्नु हुन्छ सकेजती आर्थिक, मनो बैज्ञानीक, नैतीक हर तरहको सहयोग आजको हाम्रो आवश्यकता हो। आज मेरो गाउ ,मेरो परिवार, मेरो नातागोता भन्दा माथि उठेर मेरो देश सम्झेर सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तब्य हो।
सुन्छु नेपाल सरकारले कतिपय बिदेशी देशको सहयोग इन्कार गर्‍यो रे अनी अझ सुन्छु अब सबै देशको उद्दार टोली फर्काउन पहल हुँदैछ रे। अधिकाङ्स पीडितहरु राहत नपाएको यो अवस्था अनी धेरै घाइतेहरुले उपचार नपाएको अनी हराएका ब्यक्तिहरु नभेटिएको यो हाम्रो कारुणिक अवस्थामा सहयोगी बिदेशी हातहरुलाई रोक्नु जती अरु के नै ठुलो अपराध हुन सक्छ र? यो समय भनेको सम्पूर्ण सहयोगी मनहरुलाई स्वागत गर्दै उनिहरुलाई सही ठाउमा परिचालन गर्ने समय हो। हुन त संसार कै सबै मान्छे आएर सहयोग गरेपनी पीडित आत्मालाई पहिलेको अवस्थामा पुर्याउन सकिदैन तथापी सबै सहयोगी हातहरुलाई दिशा निर्देश गर्न सके धेरै ति पीडित आत्माहरुले शान्ती पाउनेछन। हैन भने यो हाम्रो दुर्दशा अझ बढन जानेमा दुइमत छैन। तसर्थ दिएका सहयोगलाई साथलाई सहर्श स्विकार गर्दै यो आपतकालिन स्थितिलाई काबुमा राख्न एकजुट हुनु नै आजको नेपाल सरकार अनी तमाम नेपालीको निम्ती भलाई हुनेछ।
Submitted by: Rambhakta Rai